SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kabiye Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Mam Maya Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Yakataurwa naAlain Broggio
GORE ROKUBEREKWA: 1971
NHOROONDO YOUPENYU: NDAIRWISANA NEVANHU, NDAIITA ZVECHIPFAMBI, UYE ZVEMADHIRAGI
Mhuri yedu yaigara muTellancourt, musha uri nechekuchamhembe kweFrance. Baba vangu vaiva chizvarwa chekuFrance uye amai vangu ndevekuItaly. Pandaiva nemakore 8, takatama tichinogara muRome, kuItaly, munzvimbo inogara vanhu vanoshanda mabasa akaderera. Tava ikoko upenyu hwakabva hwatiomera. Vabereki vangu vaipopotedzana zvisingaite nenyaya dzemari.
Pandakanga ndava nemakore 15, amai vangu vakanditi ndimbobuda mumba kuti nditsvagewo shamwari. Saka kakawanda ndakanga ndisisawaniki pamba uye nguva yandainge ndisipo yairamba ichingowedzera. Ndakabva ndava neshamwari dzakaipa. Rimwe zuva mumwe murume akaratidza kundifarira, ndokukurukura neni. Akandipa madhiragi ndikaatambira nokuti ndaida kuonekwa semunhu mukuru. Munguva pfupi ndakanga ndabatana nechikwata chinoita zvemadhiragi uye zvechipfambi. Ndakashungurudzwa pabonde kakawanda. Ndakanga ndisisina basa neupenyu; kurarama kana kufa zvakanga zvakangofanana. Ndaisurukirwa chaizvo. Ndava nemakore 16, ndakanwa bhodhoro rewhiskey ndokusvetukira mudhamu ndichida kuzviuraya. Izvi zvakaita kuti ndiite mazuva matatu ndiri pakoma.
Ndakatanga kukoshesa upenyu, asiwo ndakanga ndisingachatani kurwa nevanhu uye ndainge ndava kuita zvechitsotsi. Ndaiudza vanhu kuti anoda kuita zvepabonde anotaura neni. Ndaibva ndaenda kudzimba dzavo ndovadhakisa nemadhiragi ndozovabira zvinhu zvinokosha zvavaiva nazvo. Zvikwata zvikuru zvematsotsi zvaindituma kunotengesa madhiragi kwakasiyana-siyana muItaly. Ndaiwanzonetswa nemapurisa. Upenyu hwangu hwaiita sehusina chinangwa uye sehusingagadzirisike asi ndaitenda kuti paifanira kuva nechikonzero chekuti ndivepo panyika. Ndakanyengetera kuna Mwari ndichimukumbira kuti andipewo gore rimwe chete rerugare uye mufaro.
Pandakanga ndava nemakore 24, ndakafunga kunogara kuEngland. Ndakanga ndava kutyira upenyu hwangu nemhaka yekushanda nevanhu vaiita zvemadhiragi. Ndisati ndaenda kuEngland, ndakashanyira amai vangu uye ndakashamisika pandakaona murume anonzi Annunziato Lugarà achitaura navo nezveBhaibheri. * Nemhaka yekuti ndaimuziva semunhu aipara mhosva, ndakatya chaizvo uye ndakamubvunza kuti akanga auya kuzoitei. Akandiudza nezvekuchinja kwakakura kwaainge aita muupenyu hwake kuti ave Chapupu chaJehovha. Akandiudza kuti ndimuvimbise kuti ndaizotaura neZvapupu kana ndasvika kuEngland. Ndakamuvimbisa kuti ndizvo zvandaizoita. Asi ndichingosvika ikoko, ndakatangazve mabasa angu.
Mumwe musi ndakaona chimwe Chapupu chichipa vanhu Nharireyomurindi neAwake! mune mumwe mugwagwa uri muLondon unogara wakazara motokari nevanhu. Ndakayeuka zvandakanga ndavimbisa Annunziato, ndokukumbira Chapupu chacho kuti chindidzidzise Bhaibheri.
Zvandakadzidza muBhaibheri zvakandishamisa chaizvo. Semuenzaniso, ndakabayiwa mwoyo nemashoko ari pana 1 Johani 1:9 anotaura nezvaMwari achiti: “Kana tikareurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama zvokuti anotikanganwira zvivi zvedu nokutichenesa pakusarurama kwose.” Vhesi iyoyo yakandibatsira chaizvo nekuti ndainzwa ndakasviba chaizvo nemhaka yemararamiro angu. Ndakabva ndatanga kupinda misangano paImba yeUmambo yeZvapupu zvaJehovha. Zvapupu zvakandigamuchira nemaoko maviri. Pandakaona kuwirirana kwavaiita semhuri imwe chete, ndakabva ndada kubatana navo. Izvi ndizvo zvandakanga ndichishuvira muupenyu.
Kunyange zvazvo zvisina kunyanya kundiomera kusiya zvemadhiragi uye zvechipfambi, chainge chakanyanya kundiomera zvikuru kuchinja unhu hwangu. Ndakaona kuti ndaifanira kuremekedza vamwe. Nanhasi ndichiri kurwisa kuti ndisiye tumwe tutsika twakaipa. Asi Jehovha ari kundibatsira kuti ndikunde. Pasati papera mwedzi 6 kubva pandakatanga kudzidza Bhaibheri, ndakabhabhatidzwa kuti ndive mumwe weZvapupu zvaJehovha. Maiva muna 1997.
Pashure pekunge ndabhabhatidzwa, ndakaroora musikana anonzi Barbara, uyo akanga achangobva kuvawo mumwe weZvapupu zvaJehovha. Mumwe aimbova shamwari yangu paakaona kuchinja kwandainge ndaita akatanga kudzidza Bhaibheri. Nekufamba kwenguva iye nehanzvadzi yake vakazova Zvapupu. Sisi vagogo vangu avo vakanga vava nemakore anopfuura 80, vakazodzidzawo Bhaibheri uye pavakazofa vakanga vatobhabhatidzwa.
Iye zvino ndinoshumira semukuru muungano yandinopinda nayo, uye ini nemudzimai wangu tinoita nguva yakawanda tichidzidzisa Bhaibheri vanhu vanotaura chiItalian vanogara muLondon. Dzimwe nguva ndinozvidya mwoyo pandinofunga mararamiro andaimboita kare, asi Barbara anondibatsira chaizvo. Ndava neupenyu hunofadza hwandaigara ndichishuvira uye ndina Baba vane rudo vandaigara ndichitsvaga. Ndakakumbira Mwari kuti andipe gore rimwe chete rerugare uye mufaro, asi akandipa zvinopfuura ipapo!
Ndava neupenyu hunofadza hwandaigara ndichishuvira uye ndina Baba vane rudo vandaigara ndichitsvaga
^ ndima 10 Ona nyaya yakanzi “Bhaibheri Rinochinja Upenyu—Hapana Kwandaienda Ndisina Pfuti Yangu,” yakataurwa naAnnunziato Lugarà, iri muNharireyomurindi yaJuly 1, 2014, peji 8-9.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndipeiwo Gore Rimwe Chete Rerugare Uye Mufaro